China Mitohy ny herin'ny mekanika: Junya dia niseho tamin'ny endrika mpamokatra sy mpamatsy fampiratiana iraisam-pirenena China (Shanghai) 2017 | Junya
Herin'ny mekanika mitohy: Junya dia niseho tamin'ny endrika fampirantiana iraisam-pirenena China (Shanghai) International Foundry Exhibition 2017
Nanomboka tamin'ny 30 Novambra ka hatramin'ny 2 Desambra 2017, nosokafana tamim-pahagagana tao amin'ny Shanghai New International Expo Center ny fampirantiana iraisam-pirenena China (Shanghai) 2017! Fantatra fa fihaonambe iraisam-pirenena mihoatra ny 20, kaonferansa indostrialy ary hetsika maro hafa manohana no hatao amin'ny lohahevitra fandefasana ity fampirantiana ity, ary mpandahateny 260 no nasaina handray anjara. Antenaina hisarika mpandray anjara marika an-tserasera sy ivelany an-tsokosoko an-tserasera sy ivelany mihoatra ny 500 izy ireo, izay ahitan'ny marika iraisam-pirenena 50%, antenaina hahatratra 200.000 ny mpitsidika ivelan'ny daholobe.
Tianjin Junya Precision Machines Co., Ltd. ary marika marika fanariana milina fanta-daza marobe avy amin'ny firenena maro manerantany, ary koa ny manampahaizana manokana momba ny indostria malaza, nanatevin-daharana ny hetsika lehibe hanampiana ny indostrian'ny fanariana milina any Shina.
Tamin'ity fampirantiana ity, Junya dia naneho ny valves vy tsy misy fangarony sy ny fantsom-by fantsona vy tian'ny mpanjifa. Nanolotra fampidirana amin'ny antsipiriany an'ireo mpitsidika ireo mpiasa mivarotra matihanina mba hanampiana ny mpanatrika hahatakatra ny foto-kevitra momba ny serivisy tokana an'i Junya ary hahafahan'ny olona maro kokoa hahatakatra ireo vokatra avo lenta sy serivisy kalitao an'i Junya.
Hatramin'ny nananganana azy, Tianjin Junya dia nanolo-tena hanatsara ny teknolojia famokarana, hanatsara ny kalitaon'ny vokatra, ary hanome ny mpanjifa ao an-trano sy any ivelany vokatra sy serivisy tsara kokoa. Tao anatin'izay andro vitsy lasa izay, ny haino aman-jery an-toerana sy avy any ivelany toy ny CCTV, BTV, ary CNN dia nanao ezaka lehibe tamin'i Tianjin Junya. Notaterina ary nohamafisiny tsara ny kalitaon'ny vokatra Junya sy ny serivisy omeny.
Amin'ity hetsika ity, Tianjin Junya dia hanohy hizaha ihany koa, hanohy ny herin'ny milina, tsy hanadino ny fikasana tany am-boalohany, handroso mialoha, ary hiara-hiasa amin'ireo mpiara-miasa aminy ao amin'ny indostria hanampy ny indostrian'ny fanariana milina any Shina handroso!
Hazo fijaliana 316 Pipe Fitting Cross, Fittings Sodina tsy misy vy, Fizarana fanariana fampiasam-bola, Valve vy vita amin'ny vy tsy miova, Valve indostrialy, Fitaovana fanariana famatsiam-bola,